Unokuzisa utshintsho kunye nokukhetha kwakho! : UMartin Vrijland
Kufakwe kuyo IIMVIWO ZAMAZIKO	by UMartin Vrijland	10 Juni 2019	• 12 Comments
Ngokuqhelekileyo xa uqala incoko nabantu abaqala ukuqaphela ukuba ihlabathi eliya kuthi ukuba abeendaba kunye nezopolitiko basitshela kusekelwe ekukhohliseni nasekukhohliseni, ukuphendula kungenakho ithemba kwaye kwinqaba "awukwazi ukwenza nantoni na ukwenza ". Ndisoloko ndifumanisa ukuba isigqibo esinomdla. Kutheni ungenakukwenza nantoni na? Ingaba kunjalo ngenxa yokuba siphila eNetherlands kunye nabantu abayi-18 abayizigidi kwilo qhekeza elincinci lomhlaba okanye ngenxa yokuba abantu behlabathi bangama-8 billion?
Yongeza inani labantu abaqaphela umfanekiso eNetherlands? Laba baninzi abadlali bezopolitiko abadlala imidlalo yekhohlo, efanelekileyo, eluhlaza, obomvu, enobuninzi kunye neenkcaso kunye nabaphathi abathintekayo kumaphephandaba (njengabafundi beendaba zeendaba, abahleli be-Telegraaf (kunye namanye amaphephandaba), UYeren Pauw, uMatijs van Nieuwkerk kwaye igama layo lilonke uluhlu lwabapapashi beengcali ezihlawulelwayo). Lona iqela elincinci.
Into esijongene nayo yinto nje ndikuthi 'inkqubo'. Inkqubo ngumsebenzi we-radar apho zonke i-radar zenza umsebenzi wewashi. Inkqubo yemithetho, imithetho kunye nentlawulo kunye nabahloli bonke baloo mithetho, imithetho kunye nentlawulo. Kwaye ke unamaziko emfundo nabaqeqeshi kunye nantoni apho abantu bafunda ukusebenzisana nayo kwinkqubo.
Isizathu sokuba asinako (okanye kunokuba: silumke) sivumele ukuba sihambe kwinkqubo kunye nesizathu sokuba singalindelanga ukugxotha le pesenti encinci yabangqina bezakhono ngaphandle kwezikhundla zabo okanye ubuncinci ukuba siyazi ukuba senziwe nabo, kukuba ubona ukuba kukho impazamo emininzi, kodwa ngexesha elifanayo kuxhomekeke kwinkqubo efanayo. Bangaphi abantu basebenza kwiiofisi ezinkulu zeofisi xa kuphunyezwa imithetho, ukujonga abanye abantu okanye ukuqeqesha isizukulwana esilandelayo. Abanye basebenza 'ngoncedo' apho wonke umntu ongenakukwazi ukusebenza ngaphakathi kwinkqubo ephawulwayo okanye ephawulwe. Ukuba umntu kule nkqubo usongela ukumisa i-timepiece, loo radar iya kutshintshwa yinto entsha.
Asiyazi nto kodwa "inkqubo"; asiyazi ihlabathi elizimela ngokuzimeleyo kwinkqubo ekhoyo. Siya kuhlala phi ngaphandle kweziseko zeemoto zethu, izitimela kunye neeplani? Singahlala phi ngaphandle kwemithetho yendlela, izibane zendlela, imithetho kunye nemithetho? Ufanele uzilungiselele njani ihlabathi? Ukuphelisa yonke loo mithetho? Ngaba kufuneka silandele uhlobo oluthile lomonakalo? Kwaye akukho intando yesininzi kuphela imodeli esebenza? Okanye ngaba uya kuphila phantsi kolawulo lokunyanzela?
Ingongoma akusiyo ukuba imigaqo engundoqo ayiyiphutha; Inqaku kukuba abo baqhuba intente bazenza ngathi siphila ngentando yesininzi, ngelixa le nto ayikho nje imaski kwirejistra. Oku kusebenza kumgangatho kazwelonke nakwamanye amazwe. Ukongezelela, ingongoma kukuba sisoloko sigxothwa ngezopolitiko kunye nakubonwakude ngokubonakala ngathi sisongelo ngolwaphulo-mthetho kunye naluphi uhlobo lwezinye izinto, okwenza kubonakale ngathi sifuna imithetho emininzi nangaphezulu, imigaqo kunye nemilinganiselo yokhuseleko. Loo moya ovunguzayo ukuqhubeka ukondla nokutya isihlwele ngokukhohlisa nokukhohlisa, ngokunyanisekileyo kubangela ukuba abantu baphile ngokubanzi nangaphezulu kwiimeko zamapolisa ezilawulayo. Ngelishwa, ixakekile kakhulu ekufumaneni isandwich, ukuze isonka kunye nemidlalo iqhubeke nokuhlawulelwa, kwaye ngoko uninzi luhlala lungaboni ukuba kwenzekani.
Ifilosofi uPlato wabhala ibali elibizwa ngokuthi "intsingiselo yomqolomba" (jonga ukudweba kweli nqaku). Abantu abasezantsi emqolombeni baboshwe. Ayazi lutho kodwa izithunzi zezinto ezidlula ekukhanyeni kokukhanya okubonakalayo. Masixelele ukuba sonke singabantu abo emqolombeni ababoshwe kwinkqubo eyaziwayo. UPlato uthi kwintetho yakhe ukuba ukuba abantu beza kuphakanyiswa phezulu, babeza kuphazamiseka ngukukhanya kwelanga baze baxineke inkululeko kunye neenqobo zangempela zezinto (apho zivele zifake eludongeni) uyazi umqolomba), ukuba banokukhetha ukhetho oluqhelekileyo emxholweni kwinkululeko ababenayo ithuba lokunambitha.
Abantu abahlala emqolombeni abayi kuze bakwazi ukukwazi amandla abo okwenyaniso ngenxa yezikhonkwane zabo. Abayi kubakho nkululeko inyaniso. Enyanisweni; Uninzi luya kukhetha indawo yokubopha kunye nesithunzi seqiniso kuba uthembekile. Uninzi luya kukhetha ukukhanya okubonakalayo kweendaba kunye nezopolitiko phezu kwelanga.
Ngethuba nje sinquma ukuhlala emqolombeni kwaye sigcine i-radar ye-system isebenza; xa nje sinelisekile ngethunzi lokwenene esinokuzifumana (kunokuba sizikhuphe kude nabasisibophelele kwinkqubo leyo imithetho kunye nemithetho yethula iiminyango kunye nesonka kwaye sidlala kuphela iifom eludongeni) asisoze siphumelele Ngethuba nje siqhubeka sihlolisana ukuba sisetyenziswe kwinkqubo kwaye akukho mntu ukhuthazayo ukuba aphule iintambo, siza kuhlala esitfini samakhono ethu kwaye sibone ihlabathi eliyinto ebonakalayo ebumnyama kwindonga.
Ixesha lokumisa i-radar; ukuba aphule iintambo kwaye abesongela abalindi bamagumbi ekungeneni kwesola. Ufuna ingoma apho amaqhawe ('sinokuba ngumhla omnye') nguDavid Bowie. yinto ongayenza namhlanje kwaye yinto echaphazela ngqo inyaniso yakho. Xa unqanyuliwe kwiintambo, ungabiza abanye phezulu kwaye uncede unqobe ukwesaba kwenkululeko yinyani. Phonsa loo minyango kwaye uthethe nomnye umntu ngokulondoloza intambo yekhoboka ngaphakathi kwenkqubo yomqolomba. Ungaqala namhlanje; Kuphela ukwesaba kwakho ukuyeka ukukhuselwa kobuxoki bendawo eyaziwayo. Sukuma uphule iminyango yakho kwaye wonke umntu ozama ukukuyeka kwaye akugcine emqolombeni uyazi ngamazwi athile ukuba awuyi kuba ikhoboka lobuxoki bokuba uphila ubomi bakho bonke.
I-Thijs H. PsyOp kwafuneka yonakalise ukufihla kwezobugcisa kwaye sele sele iphumelele namhlanje
tags: ngongoma, bowie, ngosuku, eziziimbalasane, kuba, umqolomba, amaqhawe, nje, ukhetho, eendaba, Nye, Plato, kwezopolitiko, nyaniso, utshintsho
10 Juni 2019 kwi-09: 37
Cinga ukuba izidalwa ezine ezinezibonda ezivela kule movie ibonisa amagama oopolitiki afana noMark Rutte, abaphathi beendaba abafana noJohn de Mol, uPeter R. de Vries, uJeren Pauw, uMatthijs van Nieuwkerk, uEva Jinek nabanye abaninzi. Kuphela kufuneka ubeke umbala kwaye ubone oko kwenzekayo:
10 Juni 2019 kwi-09: 42
10 Juni 2019 kwi-11: 33
Kwimi ibakala elungileyo nelicacileyo!
Inkqubo yangoku isekelwe "kumandla" kwaye "amandla" agcinwa ngabo bonke abachaphazelekayo.
Kutheni "amandla" kumanqaku okucaphuna?
"Amandla" kwinkqubo ayinamandla okwenene, kodwa "amandla" asekelwe ekungazini, ukwesaba, ukuxhaphaza nokutshatyalaliswa. Abo balawula inkqubo kwaye banako "amandla" phezu kwabantu bayamakhosi ekudaleni ukungazi, ukwesaba, ukuxhaphaza nokutshabalalisa phakathi kwabantu abantu. Umntwana wabantu uzalelwa ngaphandle komhlaba kwaye unyanzelekile ukuba athathe inxaxheba kwinkqubo, okubizwa ngokuba yinkqubo inceda abantu bonke ... uluntu; yoluntu umdla.
Akukho mdla jikelele! Ingqungquthela ekhohlakeleyo, apho amadoda, amakhulu egos, i-narcissists kunye ne-psychopath baye bakwazi ukufumana "izikhundla eziphezulu". I-Netherlands iyinkohlakalo!
Amandla okwenyaniso okanye aqinisekileyo asekelwe ekukwazi ukudala, ukuthatha uxolo kunye nokulinganisela. Abantu abanobuchule banokudala izinto ezintle kakhulu, ngaphandle kokuphazamisa ilungelo lokubakho kwabanye abantu, iintyatyambo nezilwanyana.
Ngelishwa, ngokwale nkqubo, ngokucacileyo abantu "abanengqiqo" abanengqiqo! Ezi zibonakala ngathi "ziyingqondi" ziye zacwangciswa ngempumelelo kwaye zacwangciswa kwinkqubo kwaye ziginyile ipropaganda kunye nokufundisa. Aba bantu abayi kudala nantoni na, kodwa benza imisebenzi yabo kwinkqubo, apho kungekho ndawo yokufumana ingqiqo yangempela, enokuzibonakalisa kwindalo yinyani kunye nalapho ukulinganisela nokuvumelanisa kubonakala khona. Imizekelo yabantu abanobuhlungu ngabaphathi kunye nekholeji emhlophe ... abangenako ukunyamezela abantu abanengqiqo abasemzini. Ividiyo ye-Incredibles (kwinqaku) ngumzekelo omhle wale. Wonke umntu uhleka le vidiyo ehlekisayo, kodwa ke bambalwa abanobuqhetseba bokuthabatha umyalezo opheleleyo baze bajonge ngokwabo kwisibuko ... ukuba balawula ukubeka ecaleni ilizwe elidalwe yi-ego yabo.
Buyela emsebenzini kusasa kwaye wenze okusemandleni akho ukukhusela isikhundla sakho. Ngubani owaziyo, kunokunyuswa! Musa ukucinga malunga nento oyenzayo ngokwenene. Emva koko, awukwazi ukutshintsha ihlabathi. Abantu abangakwazi ukuya emsebenzini baye bakhubazeka ngempumelelo kwinkqubo. Oku kusebenza nakwaba bantu: ningenzi nto, kuba awukwazi ukunceda.
Ukuba ungazi ngokwenene ukuba wenzeni, yabelana ngamanqaku ale webhsayithi kwaye uncedise lewebhu nge-fiat money.
10 Juni 2019 kwi-13: 19
Inqaku elilungileyo elivela kuMartin kunye nempendulo enhle kwi-Slave Wage!
10 Juni 2019 kwi-14: 27
Ubeke amanani amaninzi anjalo. Kodwa ahlala engenzi
Kungakhathaliseki ukuba ucinga njani "ngeencwadi ezingcwele," ezo ziprofeto ziya kuba "zilungileyo" zizaliseke.
Ukuba senza i-nix, loo nkqubo iyaqhubeka. Ukuba siqwalasela i-100den (nokuba ingaveli okanye yenziwe njengoluphikisayo oluchasayo) kunye nabantu ngabanye ukuxela kakubi ... .. ngoko kwandisa inkqubo yohlenga ... ... ekugqibeleni kuya kubangela umphumo ofanayo: i-100 uluntu olulawulwayo "apho abantu abaninzi bancinci (kuya kufuneka) bakhonze".
Nokuba uhlala kwindawo ethile ententeni kunye nabambalwa, kwaye ukwandisa i-endive yakho, akuyona imephu ebonakalayo, kuba olo ncinane luzakugqitywa yinkqubo efanayo.
Ngaba kunokwenzeka ukuba iInyaniso ingaphandle kweefom zesalathisi zethu? Ngaba kunokuba isiseko sale ncwadi engcwele "sizaliseka", kwaye kwakhona isiprofeto esibhaliweyo malunga nexesha elizayo? Into efunekayo ukuba ufunde ngokuqhubekayo ngumbuzo: mhlawumbi ukuba kukho ngokwenene igunya loMoya eliye lahlela eli xesha (leon), apho ubuhle nobubi bubonakaliswa kunye, kwaye oko kushiya i-eon ukuqala ukufumana kwakhona? Ngaloo ndlela siphila kwixesha elimnandi kakhulu lokufunda.
Kodwa ndiyathanda ukufunda isiqwenga okanye i-6 icebiso elisebenzayo elivela kuwe ngokubhekiselele ekubekeni umnxeba wakho emsebenzini, kwaye uthanda ukufunda iziphumo zakho ezilindelekileyo kwihlabathi elingcono.
10 Juni 2019 kwi-15: 41
Ngokombono wam unyanisekileyo ukuthetha ukuba injongo yokuba iziprofeto zonqulo zizaliseke. Kufuneka kuqatshelwe ukuba iziprofeto zeenkolelo ezinkulu zibonisa ukufana kwaye zihluke ngokubanzi, ukuze zenze ubumbano obufunekayo kumzabalazo ofunekayo phakathi kwamaqela abantu.
Ndiye ndachaza kumanqaku amaninzi endiyakholelwa ukuba siphila kwiimeko ezifanayo. Inyaniso eyimimandla eyakhiwa "utyhi" othize (umakhi wesimangeliso), oko kukunqulayo kumacandelo efihlakeleyo kunye neCawa yamaKatolika: Lucifer
Ndaphinda ndachaze ukuba intsingiselo yendlela yokufanisa kukuba kufuneka kubekho ukuzikhethela. Ngaphandle koko ukufaniswa kwakuza kuba yi-deterministic kwaye isiphumo sasiya kuba sesigxina, ngoko bekungeyiyo impawu, kodwa ifilimu ecacileyo.
Nangona kunjalo, ukwenzela ukuchaphazela isiphumo kunye nokuqondisa iskripthi (sazo ziprofeto), umakhi uye wabeka 'abalinganiswa abangabonakali' kwindlela yokufanisa; ii-avatars ezilawulwa nguye omele athumele abalinganiswa beidlali (imiphefumlo ethatha inxaxheba kumdlalo wokumisa amaninzi) kwicandelo lombhalo omkhulu.
Ewe, kukho 'uothixo' (umakhi) walo mzekeliso (umlingi-mdlali olinganayo). Ewe, kukho umbhalo onokufunyanwa kwiziprofeto kwaye ewe, kukho iqela (ii-avatars) elinga ukuqonda le script.
Ngoko ndifuna ukukunika iingcebiso ze-6 ozibuzayo:
1. Yeka ukukholelwa ezulwini nasesihogweni (ububini) kwaye ukholelwa kuyo yonke into inkolo enkulu inokuxelela yona, kuba uThixo / uSathana okanye i-sky / imodeli yesihogo yinto ebumbwe njengenxalenye yesimangalo ukubeka okulungileyo ezandleni thumela abagcini besikripthi kwaye unikezele umphefumlo wakho kunkulunkulu (umakhi we-simulation); okanye "unyana onyana" (umakhi wesimangalo kwimpahla yeegusha).
2. Zigxininise ngokoqobo kunye nokuzicwangcisa ngendlela i-avatars yokudlala engeyiyo yokudlala iqhutyelwa yinto esiyibiza ngokuba ngamaqumrhu, kodwa oko kuthetha ukuba 'ukulawulwa ngumakhi we simulation'.
3. Fumana indlela abadlali abangenayo ukudlala ngayo iziprofeto zabo zonke iicawa ukufezekisa i-script enkulu kwaye bahende imiphefumlo (abadlali abathatha inxaxheba kumdlalo wokudlala ngokubanzi) ukuba banikele ngokucacileyo kwi-AI yaseLuciferian ("ubomi obungunaphakade") yeenkolo, "ubuninzi" be-transhumanism; ibe enye kunye efanayo).
4. Ukukrazula i-avatars yokubhaliweyo engabonakaliyo, kodwa ngaphezu kwazo zonke, ukuxubusha abo bantu kumajelo eendaba kunye nezopolitiko abazinikele ngokuzithandela nangokuzithandela ukuba bafumaneke kwii-avatars ezilindileyo; sithetha ngamagama awaziwayo kwezopolitiko kunye neendaba (zombini kunye neqela eliphikisayo eliphikisanayo kunye kunye nokutya umdlalo womdlalo).
5. Yeka ukuzibeka nayiphi na indlela kwinkonzo yeskripthi kwaye udlala ngokumemisela ngokwemigaqo yabo: phumani emqolombeni uze uqaphele ukwesaba ukuba ngaphandle kwekhoboka lakho lekhoboka kwaye ngaphandle kokuba yinxalenye yomsebenzi we-radar kuya kuhamba.
6. Beka bucala naluphi na uhlobo lwenkolo nenkolelo "apha uYesu" (okanye nawuphi na amandla angaphandle "okuza kukukusindisa") kwaye ubone ukuba unesigqibo sezigqibo zakho. Ukuba ubona ukuba umyalelo wenkululeko yokuzikhethela uza kuqhubeka usebenza, ngoko uya kubona kwakhona ukuba zonke izinto ozikhethayo (eziphambuka kwinqanaba elifunayo le-script) zinceda ukuchaphazela umphumo wokugqibela kwaye unceda uLuciferian wayefuna umphumo wokuphela.
Ukuze ufumane inkcazo enzulu malunga noko ndibhekiselele ngasentla, funda eli nqaku: https://www.martinvrijland.nl/nieuws-analyses/het-is-kinderlijk-eenvoudig-om-de-toekomst-te-voorspellen-als-je-het-script-doorziet-wordt-een-nostradamus/
Okanye funda amanqaku phantsi kwemenyu phantsi kwesihloko esithi 'ukulinganisa' kwaye uqale kwiphepha le-2 uze uqhubeke ufunda kude kube yinto yokugqibela.
11 Juni 2019 kwi-21: 53
Uhlalutyo oluhle kakhulu nesishwankathelo sobungqina bazo onke amanqaku akho abhale kulo nyaka. Kuphando lwam ndiza kwisigqibo esifanayo. Injongo ebalulekileyo kodwa 'ebomini bethu' loo script ayiyi kutshintsha (ngokwaneleyo) (ubomi bufutshane kakhulu kuloo nto). Imbewu inokutsalwa kwaye mhlawumbi iya kuphuma kwiminyaka embalwa kwaye mhlawumbi into iya kwenzeka. Mhlawumbi, ngenxa yokuba umzila weskripthi uphazamisa kwaye ngoko imbewu ayikwazi ukuphuma nonke. mhlawumbi inzuzo apha ngenxa yokuba imemori yabo ayinakususwa?
Okwangoku, ndicinga ukuba kufuneka uzigcinele 'uMoya' wakho. Ngenxa yokuba (ngokufanayo nokucwaninga kwam) ukufa akuzenzeki 'umdlalo' ngokuzenzekelayo. Ngaphambi kokuba ufe, inkululeko yakho yokuzikhethela iza kuvavanywa kwaye izakuzama ukukukhetha. Kanye nje 'kumdlalo'. Ukuba uvumelekile ukuba ukhohliswe kwaye wenze ukhetho olungalunganga, 'imemori yakho iya kususwa' kwaye uza kuphinda uvuseleleke 'kwinyama'.
Ekuqaleni asiyinyama '. Siye sakhiwa ukuba singene kulo mze keliso kwaye sibuye kwakhona (kuzo zonke iindawo) ezihlelwe ngokufaniswa. Ukuba 'inkululeko yokuzikhethela' ngumthetho wendawo yonke, ngoko ke thina sinike imvume yokudlala 'umdlalo' (nangona phantsi kobuxoki). Isizathu sokuba siqinisekile ukuba sidlale lomdlalo enye ingxoxo.
Ngoko ngoku kukhohlisa kwethu (ngabanye) emva kokufa kungekudala ukhetho olungaphantsi kwakhona phantsi kwegama elithi 'inkululeko yokuzikhethela'. Kungenxa yokuba ukuba ukhetha ukhetho 'lokuzikhethela' (ngokuqinisekiswa phantsi kobuxoki), oko kungoko 'inkululeko yokuzikhethela', inyanisekileyo okanye ihlelwe, ayinandaba. Kwaye oko kukuchanekileyo indlela 'inkululeko yakho yokuzikhethela' ehlelwe ngayo.
Ngaba akusiyo ixesha lokuba (ngaphandle kokungabandakanyeki kwiskripthi kwisimo sokulinganisa (kangangoko kunokwenzeka) ukuba ugxininise ekubeni ungabonakaliswa kwakhona emva kokufa kwakho? 'Umdlalo phezu' -> 'Umdlali ophezulu, iMdlalo enye.'
Ukuba awukwazi ukuphumelela 'umdlalo', kungcono ukufunda ukuyeka ukudlala? Ngokukodwa ukuba injongo kukuhlala ihlala emdlalweni (Ubungqina / i-Transhumanism) kwaye bazama ukukunika ithuba lokushiya 'umdlalo'?
Ndingathanda ukwazi umbono wakho kule ..
12 Juni 2019 kwi-00: 56
Ndiyicinga ukuba isishwankathelo esihle kakhulu!
Ngoko ndivumelana ne100%.
10 Juni 2019 kwi-15: 54
Awuchukumisi kwinqanaba elibalulekileyo xa uthelekisa kunye nenkolelo yomqolomba. Abo bawubonile iifomu zinyani kwaye baqhelanise nelanga alingaqondwa "ngokuboshwa" xa bebuyela emqolombeni. Benza umsebenzi ogqithiseleyo emhumeni ngenxa yokuba asisetyenzisiwe kwihlabathi le-schsduw kwaye ke ngoko kuqondwa njengento encinci "ngokuboshwa".
10 Juni 2019 kwi-16: 08
Musa ukubuyela emqolombeni ngoko ..
S0M30N3 wabhala wathi:
12 Juni 2019 kwi-04: 37
Enye ingxelo ayizange ifikelele kuyo .. nale nto kuphela ikhonkco le-youtube: https://m.youtube.com/watch?v=_sB5cTocfZM
Ndiyabulela yonke into e-martin, ukuphefumlelwa, ukukhuthaza, amanqaku acacileyo, ungayeki kwaye uqhubeke ..
Ukubulisa iS0M30N3 - Jeffo
12 Juni 2019 kwi-18: 27
Ukuba sifuna ukutshintsha imeko, apha kwaye ngoku, kufuneka siqaphele ukuba ngabafana bamakhredithi abenza umthetho, ukuqhuba umgaqo-nkqubo nokuba ingahambi nge-psyops, njl. Enobungozi kubantu abaqhelekileyo. Aba bafana bafumene amagama aseDutch ngeenkulungwane kwaye bazibiza ngokuba ngamaDatshi kwimpilo yemihla ngemihla, ukuze umntu oqhelekileyo wesiDatshi acinge ukuba 'yiDatshi'. Akunjalo ukuba uxhaphaza umntu onobudlelwane obamkelekileyo ophethe izikhundla eziphambili eNetherlands kwaye ongafuni ukuyeka / angahlanganyeli ngokuzithandela. Ukuba sifuna ukutshintsha imeko, simele siyiqinisekise le ntshaba i-immigrant elite ukuyeka izikhundla zabo eziphambili kwaye sihambe eNetherlands ngokuzithandela. kuba loo mthombo weengxaki eNetherlands. Ukuba siphumelele ekubashiye eNetherlands ngokuzithandela, imeko yaseNetherlands iya kutshintshwa ngendlela efanelekileyo, ayikho into ekhohlisayo, yokunyanqa, ukunyulwa kobuxoki, iindaba eziyinyumba, njl njl
« UPeter M. (ovela kuloo dade othembekileyo kuJerenen Pauw) uphinde wabanjwa
Ukuchithwa okulawulwayo kwe-brand 'rechts', iTump, i-Brexit (kunye nayo yonke into edibene nayo) iqalile »
Iindwendwe ezipheleleyo: 12.199.924